လူမျိုးတစ်မျိုး ရပ်တည်ရေးနှင်. ဖွံ.ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် မရှိမဖြစ် လို အပ်တဲ. အင်္ဂါ ရပ်ကြီး (၄) ခု | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
လူမျိုးတစ်မျိုး ရပ်တည်ရေးနှင်. ဖွံ.ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် မရှိမဖြစ် လို အပ်တဲ. အင်္ဂါ ရပ်ကြီး (၄) ခု
လူမျိုးတစ်မျိုး ရပ်တည်ရေးနှင်. ဖွံ.ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် မရှိမဖြစ် လို အပ်တဲ. အင်္ဂါ ရပ်ကြီး (၄) ခု ရှိတယ်။အဲဒီ အင်္ဂါ ရပ်ကြီး (၄) ခု ကတော.
၁။ လူမျိုး ရဲ. အင်အား
၂။ လူမျိုး ရဲ. တန်ခိုး အာဏာ
၃။ လူမျိုး ရဲ. ပုံစံကျတဲ.နိုင်ငံရေး ဖွဲ.စည်းမှုကြီး
၅။ လူမျိုး ရဲ. ခေါင်းဆောင်ကောင်းများ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လူမျိုး ရဲ. အင်အား ဆိုတာ လူမျိုးရဲ. စည်းလုံး ညီညွှတ်မှု၊ စည်းကမ်းရှိ မှု၊ စီးပွါးရေး ဖွံ.ဖြိုးတိုးတက်မှု ၊အသိပညာ၊ အတတ်ပညာ ကြွယ်ဝမှု စသည်တို.ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ လူမျိုး ရဲ. တန်ခိုး အာဏာ ဆိုတာကတော. မိမိ လူမျိုးမှာ သြဇာ အာဏာ ရှိရမည်။ အခြား လူမျိုး အလယ်မှာ ခေါင်းငုံနေလို. တပည်.ခံနေလို. မဖြစ်ဘူး။ မိမိ လူမျိုးမှာ လက်ရုံးရည် အခြား လူမျိုးတွေ လေးစားလောက်တဲ. အစွမ်းအစ ရှိရပါမယ်။ ဒါကို ဖော်ထုတ် နိုင်ရမည်။
၃။ လူမျိုး ရဲ. ပုံစံကျတဲ.နိုင်ငံရေး ဖွဲ.စည်းမှုကြီး လူမျိုးဆိုတာ စစ်တပ်ကြီး တစ်ခု ကဲ.သို. ပုံစံကျကျ ဖွဲ.စည်းထားနိုင်ရမည်။ ပု၈္ဂိုလ်ချင်းကွဲ ၊ အုပ်စုချင်းကွဲ ၊ လူတန်းစားကွဲ ၊ ဂိုဏ်းဂဏ ကွဲ နေလို. မဖြစ်ဘူး။တစ်စိတ် တစ်ဝမ်းတည်း စည်းလုံး ရမည်။
၅။ လူမျိုး ရဲ. ခေါင်းဆောင်ကောင်းများ ဆိုတာ လူမျိုး တစ်မျိုးလုံးကို ဒုက္ခမှ ကယ်တင်နိုင်ပြီး ဆင်းရဲမှု မှ ကင်းဝေးစေပြီး တိုးတက်ပြီး သာယာအေးချမ်းအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ. ခေါင်းဆောင်လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုခေါင်းဆောင်နိုင်တဲ. ပု၈္ဂလိုလ်မရှိရင် စက်ခေါင်းမပါတဲ. ရထားတွဲကြီးလို ဖရို ဖရဲ ဖြစ်နေမှာ ပဲ ။ဒါတင်မကဘူး အရန် ခေါင်းဆောင်များလည်း လိုအပ်ပါတယ်။
This entry was posted on January 2, 2013, in မှတ်စုမှတ်ရာများ. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← ရန်ကုန်မြို့တော်၏လူစည်ကားရာဆူးလေဘုရားရှေ့၌ ကချင်ပြည်နယ်တွင်ဖြစ်ပွား နေသောတိုက်ပွဲများနှင့် ပတ်သက်၍ဆန္ဒထုတ်ဖော် ……
ရိုဟင်ဂျာ အမျိုးသားနေ. သစ္စာ အဓိဌာန်း →